Home Wararka Qaar kamida hogaanka Deeganka Soomaalida (DDS) oo ku biiraya jiida dagaalka
Qaar kamida hogaanka Deeganka Soomaalida (DDS) oo ku biiraya jiida dagaalka
Madaxa xisbiga haya talada Ethiopia ee u qaabilsan dowlad deegaanka Soomaalida, Injineer Maxamed Shaale Isxaaq ayaa markii u horeysay ku dhawaaqay in uu ku biirayo jiidda dagaalka. Waxa uu sheegay in diyaar u yahay inuu u hogaansamo baaqa Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed, xili qaar kamid ah mas’uuliyiinta dowladda Federaalka ay ku dhawaaqeen inay ka qeyb-galayaan dagaalka ka dhanka ah jabhadda Tigray.
Ciidamada Tigray-ga ayaa soo gaaray magaalo 220-km u jirta Addis Ababa, kadib markii ay wax ka yar bil gudaheed kusoo jareen dhul 100-km ka badan. Abiy ayaa ciidamada dowladda u diray gobolka Tigray bishii November ee 2020, kadib markii uu TPLF ku eedeeyey inay weerareen xero ay leeyihiin ciidamada dowladda.
Wixii markaa ka dambeeyey TPLF ayaa isku ballaarisay gobollada deriska la ah ee Amhara iyo Afar. Waxaa sii kordhaya digniinta caalamiga ah ee ku aaddan in laga baxo magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia, xilli ay kusoo dhowaanayaan mucaaradka dalkaas.